In la mamnuuco xisbiyada faqooqa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
In la mamnuuco xisbiyada faqooqa
La daabacay måndag 1 september 2014 kl 17.15
Xisbiga cunsuriga ee Svenskarnas ayaa beryahan ku jirey booqashooyin iyo bannaan-baxyo uu ku sameeynayey goobo ka mid ah dalka, iyadoona uu xisbigu ku kasbaday indhaha war-baahinta oo aad u qabtey iyo daabacaadyo badan oo uu xisbigu helay.
Gabagabadii toddobaadkii ina dhaafay oo kulan uu xisbigu ku qabsaday faras-magaalaha Istockholm ayey isugu soo baxeen kummanaan ruux oo ka soo hor-jeeda fikirrada faqooqa ee xisbiga. Hase yeeshee aanay wanaag-sanayn in xisbigaasi la siiyo ogolaansho sida ey sheegeen xeer-yaqaanno u dooda xuquuqda aadanaha, sida uu qoray war-geeyska Dagens Nyheter.
Gar-yaqaan Peter Nobel, horayna u ahaan jiray wakiilka ka hor-tagga faqooqa iyo agaasimihii guud ee ururka madaxa bannaan ee Laan-khayrta Cas, sida uu sheegay uu dhaleeceeynayo halka ey xubnaha baarlamanka iyo dawladduba ka taagan yihiin in ciidanka ammaanku ogolaansho u siiyo xisbi cunsuri ah inuu kulan ku qabsado magaalada, iyada oo la adeegsaneyo xeerka xoriyadda qowlka.
Ma ahayn in xisbigaa loo ogolaado bannaan-bax. Madaama ey ka xaaraantimeey-san yihiin suuqyada iyo dhabbooyinka dalka in lagaga dhawaaqo ereyo faqooq ah, sida uu war-geeysku qoray.
Xisbiga cunsuriga ee Svenskarnas parti ayaa xaqiiqdii ah xisbi aad u tayo liita tiro ahaan dadyoowga xubnaha ka ah. Doorashadii baarlamanka ee sannadkii 2010 ayuu xisbigu ku hantay codad gaarsii-san 700 oo keliya, isla-markaana ey xubno ku leeyihiin hal degmo oo keliya. Hase yeeshee ey dadka qaarkii qabaan in bannaan-baxyadan uu xisbigu ku hananayo codad dheeri ah.